भ्रष्टाचारको तिब्र विकास | दिशानिर्देश कञ्चन साप्ताहिक
भ्रष्टाचारको तिब्र विकास
November 24, 2018 Dishanirdesh Kanchan0Comments
देशले शान्ती सुव्यवस्था सदाचार मागेको मात्र हैन कानूनी राज्यको स्थापना पनि मागेको छ । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र मात्र होइन एक इमान्दार नागरिक कानूनी राज्य मागेका छन् । जनताले कोही सानो ठूलो होइन सबैलाई समान अधिकार र समानता चाहेका छन नागरिकहरुले । जाती लिङ्गभेद चाहेका छैनन हुनु हुदैन पनि तर यहाँ भएको छ । कहिकतै भ्रष्टाचार भईरहेको जानकारी सरकारलाई दिदा पनि कारवाही हुदैन । देशलाई कसरी भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने भन्ने कुराको रोकथामको लागी योजना आयोगले योजना बनाउदा खेरी र राज्य सञ्चालन के कुन आधार कुन शैलीले चलाउने भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्ने काम पनि प्रमुख नेताहरुको हो भने कार्यान्वयन गर्ने गराउने काम सरकारको हो । दूरदराजका पालिकाहरुमा व्यापक रुपले भ्रष्टाचार भईरहेको कसरी छ भने योजनागत विकासका काम नभई शक्तिको आधारमा मनपरी तरिकाले प्राथमिकता विपरित गरिएका काम कारवाहीहरुबाट भएको बुझिन्छ ।
पालिकाहरुको अर्थात प्रान्तहरुमा योजना आयोगले बनाएका योजनाहरुमा जब पालिकाहरुमा कार्यान्वयन हुन्छ त्यस बेला पालिका सरकार तथा प्रान्त र केन्द्रिय सरकारका योजना भनेर योजना स्थलमा नै योजनाको लागत काम समाप्त गर्नुपर्ने अवधी खोलेर निर्माण गर्ने प्रमुख ठेकेदार वा उपभोक्ता समितिका अध्यक्षको नाम दातृ निकायको नाम र लागत समेत खोली साईडमा साईनबोर्ड राख्नुपर्दछ । योजनाहरुको सि.नं. रहेको भए अनुगमन या लेखा परिक्षण गर्दा चेकजाँच गर्न सुविधा पर्ने काम हुन्छ र सबै जनतालाई पनि योजना र योजनाको लागत गुणस्तर बारेमा जानकारी हुन्छ । त्यसरी बनाएका योजनाहरुमा भ्रष्टाचार कम हुने गर्दछ ।
भ्रष्टाचार त कवि भानुभक्तको पालादेखि भैरहेका प्रमाणहरु उनका लेख रचनाबाट र पृथ्वीनारायण शाहको वाणीहरुबाट पनि भ्रष्टाचार उन्मुलन हुनुपर्छ भन्ने बाणीहरुबाट पनि प्रमाणित हुन्छ ।
वर्तमानमा भने विभिन्न रुपबाट भ्रष्टाचार भईरहेको छ सुन्ने र कारवाही गर्ने कोही छैन भन्नु पर्ने अवस्था छ । प्रमाणको लागी भन्नु पर्दा महेन्द्रनगर नगर विकास समितिले गरेको भ्रष्टाचारको बारेमा सबै सामु छ कारवाहीको लागी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान सित पनि विनय गरियो । कारवाहीको परिणाम जनता माझ आएन प्रशासन तथा केन्द्रिय सरकारको निकायबाट पनि त्यस बारेमा कुनै कारवाही भएन । भीमदत्त नगरपालिकाले नक्सा पास नगराएका भनव निर्माण हुँदा किन हेरेन । नगरपालिकालाई झुक्याएर हो वा मिलोमतोमा महेन्द्रनगरबाट हवाई मैदान मझगाउँ जाने बाटाको किनारमा नालालाई असर पर्ने गरेर भवन बनाई रहेका छन र बनाई सकेका पनि छन् ।
कुन अमिनले त्यहाँ नापजाँच गरी पुर्जा दिलाउने काम गर्यो । जनताको साँझा सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने काम नेपाल सरकार र नगरपालिकाको दायित्व भित्र पर्छ पर्दैन ? यस्ता काम कुरामा कसको सहभागीतामा भ्रष्टाचार भयो पाठक बन्धुले समेत सहजै अनुमान गर्न सक्नेछन् । बरु यस्ता मुद्दाहरुको सुनवाई राणा तथा पञ्चेकालमा हुन्थे आज के भएको हो के भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी, हत्यारा, बलात्कारीहरुलाई पनि लोकतन्त्रले त्यस्तो अपराध गर्ने स्वीकृति दिएको हो ?
यदि भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न सम्बन्धित पदाधिकारीहरुले चाहन्छन् भने सजिलै सित रोकथाम गर्न सकिन्छ । जसले कानून विपरित काम गरेको छ, त्यसलाई तुरुन्त कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । जस्तो कि भीमदत्त नगरपालिका क्षेत्रकै कुरा गरौं मेन बजारमा एउटा दुईटा होइन सयौं भवनहरु नक्सा पास नगराएरै निर्माण भईराखेका छन् भने नगरपालिकाले आफ्नो जनशक्ति लगाएर कारवाही गर्ने अधिकार नगरपालिकालाई हुँदाहुँदै किन गरेन भन्ने प्रसँग आउछ । त्यस्तै सबै कार्यहरुमा हुन्छ स्थानीय केन्द्रिय तथा क्षेत्रीय निकायबाट कुनै कारवाही नहुनुको गम्भिर अर्थ छ कि छैन त्यसबारेमा कसले निरक्यौल गर्ने ? प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा वा मन्त्री परिषद् सचिवालयमा यो कुरा पुग्छ पुग्दैन ? पुगे पनि हेर्छन हेर्दैनन् भन्न सकिने अवस्था छैन । किनभने छर्लङ्ग देखिएका हाँकाहाकी भएका भ्रष्टाचार देखे नदेखे झै गर्छन भने जनताले नदेखेका भ्रष्टाचारहरु कति होलान, आफै विचार गरौं ।
← अमृत तत्व आत्मबोध
के थाहा छ युवाहरुका ईच्छा आकांक्षा ? →